अनुमति नलिई ११ विद्यालय सञ्चालनमा « Deshko News
अनुमति नलिई ११ विद्यालय सञ्चालनमा
सल्यान, वैशाख ११
जिल्लामा अनुमति नलिएर ११ विद्यालय सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्राथमिक तहका निजी विद्यालय अनुमति नलिएर सञ्चालन भइरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
अनुमति नपाएका कक्षामा विद्यार्थीलाई पढाउँदा त्यसको मान्यता नहुने भएकाले विद्यार्थीलाई समस्या हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
“विद्यालय सञ्चालनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा नगर्ने र तल्लो कक्षाको अनुमति लिएर माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसलाई रोक्न विशेष पहल गरेका छौँ ।” जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो ।
अनुमति बिना सञ्चालन रहेका विद्यालयमा बालबालिकालाई भर्ना नगर्नसमेत अभिभावकलाई जिशिअ सुवेदीले अनुरोध गर्नुभयो ।
निजी स्कुल भन्ने बित्तिकै अभिभावक शिक्षक कस्ता छन् ? अनुमति लिएको छ कि छैन ? भौतिक संरचना कस्तो छ ? कुनै ख्यालै नगरेर भर्ना गर्न हतार गर्नु हुन्छ जसले आफ्नो बालबालिकाको भविश्य अन्धकार भएको थाहै पाउदैनन् ।